‘कोभिडविरुद्धको खोपले बाँझोपना ल्याउँदैन’ - Sero Fero News
कोभिड १९ विरुद्धको खोपले बाँझोपना ल्याउँछ भन्ने कुरा आधारहीन रहेको विज्ञ चिकित्सहरूले बताउँदै भ्रमपूर्ण कुरा रहेको औंल्याएका छन्। परिवार कल्याण महाशाखाका डा. पोखरेलले कोभिड १९ विरुद्धको खोपले बाँझोपना ल्याउँछ भन्ने कुरा भ्रम फैलिएको जनाउँदै यस्तो भ्रमको पछि नलाग्न अनुरोध गरेका छन्। यसको सट्टा गर्भवतीले कोभिड १९ बिरुद्धको खोप लगाउन पाउँदैनन्। कुनै महिलाले पहिलो डोज खोप लिएका दोस्रो डोज लिनु अघि नै गर्भवती बनेमा दोस्रो डोजबाट बंचित हुने हुनाले नलागउन सुझाएको हो। ‘ बिकसित देशमा बच्चा जन्माउने योजना हुन्छ, नेपालमा त्यो नहुने हुनाले सन्तान जन्माइहाल्ने दम्पत्तिको हकमा यस्तो सन्देश दिएको हो,’ डा. पोखरेलले भने।
खोप लिएपछि पनि अरूमा सर्छ किन सर्दैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन नभइसकेकोले खोप लिएपछि पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उपे्रतीको सुझाव छ। ‘शरिरमा बनेको एन्टिबडीले शरीरभित्र प्रवेश गरेको भाइरस सक्रिय नहोला तर अरूलाई सर्न सक्छ,’ उनले भने।